Na Namely Tampoka Aza Ny Tafio-drivotra, Dia Mijoro Tsy Mihontsona Izahay. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2017 6:53 GMT
Manahy oram-batravatra tena henjana any amin'ireo faritra maro ao amin'ny nosy ny Departemanta misahana ny Toetrandro ao Sri-Lanka
Somary niavaka ireo fivorianay. Misy foana ireo zavatra manaitra na manetsika manodidina ny asanay. Sahala amin'ny toa manaraka anay eny amin'izay rehetra alehanay eny ny loza. Nefa na izany aza, fantatray ireo fanamby, miatrika ireo fanamby foana izahay isanandro ary ihomehezanay ireo fanamby. Manorina ny fahavononanay izy ireny
Fihaonambe anatiny an'ny vondrom-piarahamonina GV nandritra ity herinandro ity mialoha ny Vovonana ho an'ny daholobe.
Ity no fihaonambe faharoa ho ahy, ary feno fankasitrahana tanteraka aho nohon'ny fahatongavako eto, na eo aza ny toetrandro ratsy. Teo anelanelan'ny fihaonambe teo aloha sy ity iray ity, tsy mpandika teny fotsiny intsony aho fa nisondrotra ho lasa mpandika sady mpanoratra ho an'i Amerika Latina, ary izany dia tena avy amin'ny hatsaram-panahy tsy mampinon'ny fianakaviambe GV, izay tsapako ho toy ny ahy.